Nkwado - Foton Motor Group Co., Ltd.
FOTON nwere utu aha nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala mbụ na China na-etinye aka na R & D nke ụgbọ ala nke ike na-acha akwụkwọ ndụ, ike izizi nke ụgbọ ala nke mmanụ hydrogen na ụgbọ ala na-arụ ọrụ nke kachasị ogologo njem nke otu ụgbọ ala n'ụwa.
ỌRER ỌR EN ỌH NEWR NEW
Vehiclesgbọ ala azụmahịa niile, gụnyere ụgbọ njem, ụgbọ ala, ụgbọala na SPV. Gbọ ala AUV site na 5.9m ruo 18m dị nchebe, ihe a pụrụ ịdabere na ya na azịza ndụ akwụkwọ ndụ maka njem ndị njem, njem na ịgagharị. Ahịa nke ụgbọ ala akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahọrọla nke mbụ na ụlọ ọrụ ahụ maka afọ ndị sochirinụ. Na Mee 2016, FOTON meriri n'usoro bọs 100 nke ejiri mmanụ hydrogen kwadoro, nke kachasị na ụwa.
ỌREC ỌR EN ỌR NEW ỌH NEWR.
FOTON nwere ike ịrụ ọrụ R & D nke 8 isi teknụzụ nke ụgbọ ala ike ọhụrụ gụnyere mwekota ike, batrị mbukota, njikwa moto na ngwanrọ njikwa yana etinyela akwụkwọ maka ikikere metụtara 1,032 ma nwee ihe karịrị 70% teknụzụ patenti. FOTON enweela ihe ịga nke ọma mepụtara onye njikwa ụgbọ ala 32-bit, sistemụ njikwa batrị yana sistemụ njikwa moto, nke etinyere na ngwaahịa dị iche iche gụnyere ụgbọ ala ike ọhụrụ na ngwa ọrụ lọjistik. R & D onwe ha nke afọ na - enyere FOTON aka ịnwe teknụzụ ndị bu isi, batrị na sistemụ elektrọnik iji mezuo ihe achọrọ na ịgbalite, ịrịgo, ịchụgharị na ịgba ụgwọ oge.
FOTON etinyela ihe karịrị ijeri RMB 23 ma wuo osisi ụwa nke oge a na akara mmepụta akpaka maka afọ 4 dabere na echiche nke efu efu, enweghị kọntaktị na akpaaka site na nkwalite teknụzụ akpaka, dijitalụ na ọgụgụ isi.
Mkpụrụ osisi nke oge a
Akpaka mmepụta edoghi
Robot mkpuchi akara
13.7m ụgbọ ala mmepụta electrophoresis
Automatic ịgbado ọkụ akara
Robot nzukọ akara